• - Promotion & Event ပွဲများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
• - FOC ပေးအပ်မည့်ပစ္စည်းများအား အကြံပြုရှာဖွေတင်ပြနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
• - ပစ္စည်းအဝင်အထွက်များအား စာရင်းပြုစုနိုင်ရမည်။
• - Cosmetic လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။
• - တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ (သို့မဟုတ်) အနိမ့်ဆုံးအခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
• - ကွန်ပြူတာကောင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
• - အကျင့်စာရိတ္တအထူးကောင်းမွန်ပြီး လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
• - ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိ၍ အလှကုန်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။
Work location No. 18, Mya Street, Myanma Gone Yaung Housing, Myittar Nyunt Quarter, Tamwe Township.
Company Industry: Advertising & Promotion
6 Days, Full time , 150 000 - 180 000 Ks, Trading
Sales & Marketing Jobs Sales & Marketing Jobs Advertising & Promotion Jobs in Myanmar, jobs in Yangon